Sacuudi Carabiya: Toban waxyaabood oo ay tahay in wax laga ogaado Abdelaziz Al Saud, Wasiirka Tamarta ee cusub - JeuneAfrique.com - SAAXIIBADA CUDUR
ACCUEIL » SIYAASADDA »Sacuudi Carabiya: Toban Qodob Oo Ay Tahay In Aad Ka Ogaato Abdelaziz Al Saoud, Wasiirka Cusub ee Tamarta - JeuneAfrique.com
Cabdelaziz Al Saoud, Wasiirka Tamarta ee cusub ee Sacuudiga. © Jon Gambrell / AP / SIPA
8 ee Sebtember, Boqorka Sacuudi Carabiya iyo "MBS", dhaxalkiisa, ayaa aaminay amiirkan karti iyo khibrad u leh borotokoolka Tamarta, calaamad u ah rabitaankooda ah inay la wareegaan waaxdan istiraatiijiga ah.
1. Arimaha qoyska
Wuxuu ku dhashay 1960, Abdelaziz Al Saoud waa ina afraad ee Boqor Salmaan iyo wiilka walaalkiis ah ee dhaxal-sugaha Boqortooyada Maxamed Ben Salmaan (MBS). Waa xubnihii ugu horreeyay ee qoyska xukunka haya ee loo magacaabay Wasiirka Tamarta.
2. "Aad u aqoonsan"
In kasta oo waalidnimadiisa uu door ka ciyaaray magacaabiddiisa, haddana sikastaba “aad ayuu ugu wanaagsan yahay booska,” sida uu sheegayo khabiirka dowladaha khaliijka ee Theodore Karasik. Ku biiray Wasaaradda Tamarta ee 1987, Wasiir ku-xigeenka Batroolka ee 1995, wuxuu ahaa la-taliyaha ugu weyn ee allaha u naxariistee Cali Al Naïmi ilaa 2016.
"Waa inaan ciqaabnaa raalligelinta qabyaaladda" dalka Cameroon
Algeria: Gaid Saalax wuxuu doonayaa inuu ka hor istaago marin-u-dhiggayaasha inay galaan Algiers - JeuneAfrique.com